Mkpado: azụlinks | Martech Zone
Tag: njikọ azụ azụ
Moz Pro: na -eme nke ọma na SEO
Na Tọzdee, Septemba 14, 2021 Na Tọzdee, Septemba 14, 2021 Douglas Karr
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta (SEO) bụ mpaghara dị mgbagwoju anya na-agbanwe agbanwe. Ihe ndị dị ka algorithms na -agbanwe agbanwe nke Google, ọnọdụ ọhụrụ, yana, n'oge na -adịbeghị anya, mmetụta oria ojoo a na -eme ka ndị mmadụ si achọ ngwaahịa na ọrụ na -eme ka ịkpọgide otu atụmatụ SEO sie ike. Ndị ọchụnta ego aghaghị ịbawanye ọnụnọ weebụ ha nke ukwuu iji pụọ iche n'asọmpi ahụ na mpaghara idei mmiri ahụ bụ nsogbu maka ndị na -ere ahịa. N'inwe ọtụtụ azịza SaaS n'ebe ahụ, ọ na -esiri ike ịhọrọ na
Kedu ihe bụ Nofollow, Dofollow, UGC, ma ọ bụ Njikọ Nkwado? Gịnị Mere Backlinks Ihe Ji Chọọ Ọnọdụ Ọchụchọ?
Tọzdee, Eprel 1, 2021 Friday, April 2, 2021 Douglas Karr
Kwa ụbọchị, igbe ozi m jupụtara na spam ụlọ ọrụ SEO ndị na-arịọ arịrịọ itinye njikọ na ọdịnaya m. Ọ bụ arịrịọ na-adịghị agwụ agwụ ma ọ na-akpasu m iwe. Nke a bụ otu email si agakarị… Ezigbo Martech Zone, Achọpụtara m na ị dere edemede a dị ịtụnanya na [isiokwu]. Anyị dere ederede ederede na nke a. Echere m na ọ ga-eme nnukwu mgbakwunye na edemede gị. Biko mee ka m mara ma ị bụ
Ndị na-ere ahịa dijitalụ na-adabere na njikọ njikọ dị ka atụmatụ dị mkpa na njikarịcha search engine (SEO) iji mee ka ọkwa peeji ha dị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs). Site na ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iji nweta backlinks ma melite okporo ụzọ saịtị, na-ebute ụzọ, ma nweta ebumnuche ndị ọzọ, ha amụtala ịtụgharị n'ọtụtụ ụzọ ndị ewu ewu na igbe ọrụ ha. Kedu ihe bụ backlink? A backlink bụ clickable njikọ site na otu saịtị na nke gị. Nchọgharị ọchụchọ dị ka
Nchịkọta Blogger nke ndị ọbịa gị
Wenezdee, Jenụwarị 22, 2020 Saturday, January 2, 2021 Douglas Karr
Companieslọ ọrụ SEO na-anwale ma na-ejigharị nsonaazụ ọchụchọ… naanị ya agaghị akwụsị. Matt Cutts nke Google dere nnukwu post, mbibi na ọdịda nke nchịkọta ndị ọbịa maka SEO gụnyere vidiyo na nguzo ya na ntanetị ndị ọbịa na Matt na-enye nke a dị ka isi okwu ya: Naanị m chọrọ ịkọwapụta na ụyọkọ nke obere ogo ma ọ bụ spam saịtị ejirila "blọgụ ndị ọbịa" dị ka atụmatụ njikọ njikọ ha, anyị na-ahụ a